ရှောလမုန်သည်ဧဒင်ဥယျာဉ်ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ပုံရိပ်နှင့်လာမည့်ထောင်စုနှစ်တစ်ခုပရောဖက်ပြုစံပြပြီးနောက်ပရောဖက်ပြုအနီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်သူ၏သတို့သမီးကို "တိရဇ" (HV 6: 7) နှင့်အတူရှောလမုန်မင်းသည်, မိမိကဧဝနှင့်အတူအာဒံ၏အပုံရိပ်အဖြစ်ကသူ့သတို့သမီးကိုနှင့်အတူသညျယရှေုရှေိယသ / ခရစျတျော၏ပရောဖကျအမျိုးအစားအပြီးဖြစ်ကောင်းအလားတူပရောဖကျဖွစျသညျ - အကြာတွင်ထာတှငျ "သိုးသငယ်၏ဇနီးဟုချေါသ "(21: 9) ။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလည်းအနာဂတ္တိ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အနှစ်သာရကမှလာလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးသတိပေးချက်ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် "စွန်းအသွေးတော်" ၏အနက်ကိုမှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သွန်းသောအသွေးကို (လူ့သွေး, ဟေဗြဲ။ ကြောင်းအမည်ရ Adamdam ), အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရုတ်တရက်သေခံခြင်းအားဖြင့်အရောင်မြေဆီလွှာတွင်နီ။ အဲဒီကအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့သားနှစ်ယောက်ထက်မထပ်မံ သွား. ကာဣနနဲ့အာဗေလကာဣနသည်မိမိညီအာဗေလကိုသတ်ပစ်သည့်အခါပထမဦးဆုံးသွေးထွက်သံယိုရာအရပျကိုယူမှီ, မြေပေါ်တွင်အပြေးခဲ့သည်။
"Herrschaftskelter စာနယ်ဇင်း (လူ့စာနယ်ဇင်း): ငါဗြာဒိတျ 14:20 အတွက်ဘုရားသခငျ့ domsakt ကိုသွား - ထိုအခါဖော်ပြထားခြင်းနေဆဲအပြင်, မြေကြီးပေါ်မှာလူ့သွေးများကွယ်ပျောက်သွားအမှတ်ဖို့ 1st နှင့် 2nd ကမ္ဘာစစ်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောရလဒ်များကိုလွန်းအာကာသမွှုပျနှံဖို့မ မြို့သူမြို့သား (ဂျေရုဆလင်) ပြင်ပမှာနင်း, အသွေးသတင်းစာထဲကနေစီးနှင့်တထောင်အဆင့်ဆင့်ပျောက်များ (38 ကီလိုမီတာခန့်) မြင်းဇက်ကြိုးကိုမှီသည်တိုင်အောင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
ဆိုင်းငံ့ကြီးစွန်း: " ... ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါမွကွေီးဝိညာဉ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုအခါဝိညာဉ်ရေးရာရောက်လာတယ်။ ပထမလူ (ဂရိ။ , မြေကိုမြေကြီးဖြစ်ပါတယ် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ , cf .. Gejsisk / seisisk) ။ ကောင်းကင်ဘုံမှဒုတိယလူ (ဂရိ။ uranus). Så som den jordiska människan var (efter syndafallet), så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är (fullkomnad), så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans (bristfälliga) bild, ska vi också bära den himmelska människans (fullkomliga) bild. Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna (tron på Jesu nära återkomst brann starkt för 2000 år sedan) men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.”
နှင့် Mark 12:24 နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်: "ယေရှု (ဇဒ္ဒုကဲ) ကလညျး: 'Tar သင်ကမျြးစာကိုမျှမသညျဘုရားသခငျ၏တနျခိုးနားမလညျလို့မှားဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော "အလားတူဖြစ်ရပ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုလု (: 34-36 20) ကိုအောက်ပါအတိုင်း" သေလွန်သောသူတို့သည်သူတို့လက်ထပ်ထမြောက်တော်မူကြသည်မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးစားနေကြသည်, ဒါပေမယ့် himlen အတွက်ကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ '' အခါ။ ယရှေုသညျဤလောကတှငျ them'De လူနေမှုဖြေကြား လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်လက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သေခြင်းမှအခြားကမ္ဘာနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရောက်ရှိဖို့ (ယုံကြည်ဖို့ရှေးခယျြ) ထိုက်တန်ဟုယူဆနေကြသည်တဲ့သူတွေကိုသူတို့မလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်လက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းကျီဖြစ်သောကြောင့်, ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏သူတို့က, တော့ဘူးမသေနိုင်။ "
ဗျာဒိတ် 14း4 ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်: " ... ဒါကြောင့်သွားလေရာရာ၌သိုးသငယ်ကိုလိုက်နာသောသူတို့အား။ ဤရွေ့ကားဘုရားသခင်နှင့်သိုးသငယ်သည်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအသီးအပွအဖြစ် (သူတို့ဝိညာဏ "သတို့သမီး" သို့မဟုတ် "ကညာ" ဖြစ်လာကြပါပြီ), လူတို့အထဲကရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ "
ဗြာဒိတျအချိန်နှင့်ထာအတွက်အထစ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အောက်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်ထပ်မံသွားနှင့် tailpiece တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသို့ရောက်ရှိရန် - (: 11-17, 19: 6-9, 11-14 ဗျာ 7) ကိုးကားကမျြးစာကိုအညီကျမ်းစာလာသည်အနေဖြင့်အနည်းငယ်ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်နိုင်သည်:
ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမအားနည်းသေတတ်သောလူသားမြားသညျ (ရှိ၏ Adamites အဖြူရောင်မြင်းပေါ်ယေရှုနှင့်အတူစီးနင်းသောဒီတော့ပွောဖို့) ။ ကသာမရှိရင်သူတို့သူ့ကိုတူသောသို့လှည့်များနှင့်ကောင်းကင်တမန်များ, ထိုကောငျးကငျချစ်စရာကောင်းတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကကောင်းကင်တမန်တို့ထက် "သာလွန်" ဖြစ်ပါသည်။ ဘုန်းအသရေအတွက်သူတို့ဘုရားနှင့်ကောင်းကင်တမန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြားရပ်တယ်။ ပထမဦးဆုံးဆက်ဆံရေးအတွက်ကျနော်တို့ကိုဖတ်ပြီး: "ဒါဟာကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသူ (ယရှေု) ယူ. , ဒါပေမယ့်အာဗြဟံ၏အမြိုးသားအ (ယုံကွညျခွငျးရှိသောသူတို့အား) မဟုတ်ပါဘူး။ " (ဟေဗြဲ 2:16) ထို့ပြင် "ဘုရားသခငျ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကောင်းကင်တမန်အားစိတ်ဝိညာဉ်သည်မဟုတ်, (ကမ်းလှမ်းမှုကို accept) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အမွေခံရလတံ့သောသူတို့အားကူညီစေခြင်းငှါစေလွှတ်?" နောက်ဆုံးအောင်ပွဲခွအေနအေခုနှစ်တွင် (ဟေဗြဲ 1:14) 1 ကောရိန်သု6မှာကောင်းကင်တမန်တို့အထက်တစ်ဦးထမြောက်တော်မူအနေအထားအထိ်လည်းကြွေတတ်: 2-3: "သင်သန့်ရှင်းသူတို့သည်လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြပါနဲ့ ... ငါတို့သည်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မည်ဟုရကြလိမ့်မည်ကိုသင်တို့မသိကြသလော?" ကျနော်တို့အချိန်အတွက်ဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမကိုးကွယ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ထာဝရရှုထောင့်ကိုအဂုဏ်ယူစေသင့်ပါဘူး။
ယုံကြည်သူတစ်ဦးရဲ့ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအသွေးအသား၏မိမိ၏မွကွေီးပါးလွှာ kroppstid, ကနေလွန်သည့်အခါဘုရားသခင့အစီအစဉ်၏နောက်အဆင့်စစ်မှန်တဲ့လာအဖြစ်ကဒီအဆင့်မှာ - "သစ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်အရာအတွက်မြေကြီးသစ်နှင့်အတူ ဖြောင့်မတ် "(2 ပေတရု 3:13) ။
သငျသညျအမြားဆုံးအသွင်ပြောင်းများထဲမှရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ကြိမ်သာထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်သူဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီသမ္မာကျမ်းစာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစွန့်ခွာဘူး။ လို့မဆိုသမ္မာကျမ်းစာစာသားထဲမှာသငျသညျစညျယုံကွညျခွငျးနှငျ့ဘဝ Read က "သန့်ရှင်းသော။ " က "ကောငျးကငျအလောင်းတွေ" မှသင်တို့၏နာမတစ်ခုသခင်ဘုရားလွှဲပြောင်းမျှော်လင့်ထား။ အပြစ်တရားမရှိဘဲအဘယ်သူမျှမအနာရောဂါမျှနာကျင်မှုမရှိဝမ်းနည်းခြင်း - - ဝိညာဉ်တော်သည်လွတ်လပ်စွာအားလုံး "ဒေသများတွင်" နှင့်ထာဝရကောင်းကင်ဘုံရှင်ကမ်ဘာပျေါတှငျသခငျယရှေုနဲ့တူတလျှောက်ရွှေ့သင်မည်ကဲ့သို့အတွက်ကိုကြည့်ပါ။
ထိုအခါအသစ်သောဝိညာဉျရေးရာ / မှော်အတတ် / နောစသွန်သင်ချက်နှင့်ဘာသာတရားဆိုတာကိုသတိရ, ဘေးဥပဒ်နှင့်စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဆန့်ကျင် diabolical တိုက်ခိုက်မှုထက်ပိုမိုချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအအံ့သြလောက်အောင်, agnosticism သို့မဟုတ်ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ပုံစံအတွက်ကြောင့် သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကယ်တင်သောသခင်အဖြစ်ယေရှုငြင်းပယ်ဖို့အာဒံအချိန်ကနေထာဝရကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကူးအပြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မဖြစ်ပါတယ်။ ဒါထာဝရကောင်းကင်ဘုံရှင်အတွက်ယုံကြည်ခြင်း၏စောင့်ဆိုင်းကလူမြားသညျ!
Listen အောက်ပါကျမ်းချက်တွေကိုဖတ်ရှုနှင့်ဆင်ခြင်။ အသေခံပြီးနောက်ယုံကြည်သူမှဖြစ်ပျက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ - မှော်အတတ်သို့မဟုတ်ဘုရားမဲ့ဝါဒ - ကယနေ့ဟောပြောခြင်းမှထိပ်တန်းအရေးပါမှုသည်ကမ္ဘာ့အကောင်း Grace ရှာဖွေနေခြင်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မိမိတို့၏တာဝန်ယူမရှိ, ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ဂဟေဆက်နှင့်အတူနဂိုအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
"ဒါပေမယ့်အညီကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း, ကပြောပါတယ် မြင်ကြရ, မနားကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်, နဲ့လူ့နှလုံးသညျဘုရားသခငျသညျသူတို့အတှကျမတ်ေတာသူ့ကိုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးအဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးမအဘယ်အရာကိုမျက်စိ ။ " (1 ကော2း 9)